METRICS GRIMOIRE Qalabka lagu soo saaro cabbiraadaha software-ka. | Laga soo bilaabo Linux
nacaybtire | | Aplicaciones, GNU / Linux
Markuu waqtigu dhammaado, waxaa la muujiyey in badan oo ka sii hubaal ah in cabbiraadaha software-ka ayaa lagama maarmaan u ah in la awoodo in la diiwaan geliyo xaaladda mashruuc gaar ah, tanina waa ay dhaafsiisan tahay in la yiraahdo ama aan la oran mashruucu waa mashruuc Ilaha furan.
Metrik Grimore waa isugeyn qalab ah oo noo oggolaan doonta inaan helno qiimeyaal muhiim ah oo ku habboon oo ku saabsan geeddi-socodka horumarinta oo ku saleysan dib-u-eegista, ka-goynta, iyo waxyaabo kale, asal ahaan kala duwan, marka lagu daro Metrics Grimoire waxay ku dhex jirtaa geeddi-socodka horumarinta, dhammaan doodaha iyo faallooyinka la sameeyay qaab dhismeedka barnaamijka softiweerka ah si loo qaato indha indheynta ay sameeyeen bulshada horumarku wuu soconayaa, gaar ahaantan ayaa mas'uul ka ah ogolaanshaha cunsur muhiim ah oo lagu daro horumarka, kuna kala duwan inta badan mashaariicda; waxaas oo dhan si loo abuuro tilmaamayaal u oggolaanaya falanqaynta mashruuc softiweer ah.
Qalabka MetricsGrimoire waxaa taageera noocyo badan oo keyd ah, oo ay ku jiraan kuwa u jooga GitHub (git iyo dhibaatada GitHub raadinta).
MetricGrimoire hore ayaa loogu adeegsaday falanqaynta mashaariic badan oo kala duwan iyo, iyadoo lala kaashanayo aaladaha muuqaalaynta sida VizGrimoire (tusaale ahaan) waa gebi ahaanba suurtagal in la helo tirakoobka amarka ama warbixinnada.
MetricsGrimoire wuxuu asal ahaan ka soo jeedaa Jaamacada Rey Juan Carlos (Madrid) ee kooxda cilmi baarista libresoft, oo ka kooban isugeynta codsiyada la magacaabay Qalabka LibreSoft. Dhawr sano ka dib cilmi baadhis iyo horumarin, bulsho yar ayaa bilaabay inay ku faafto hareeraheeda, taas oo waliba ay ku jiraan kuwa horumariya iyo kuwa adeegsada adduunka.
Hadda, waa run in tani ay tahay aalad ka badan intii loo baahnaa marka la soo saarayo softiweer dhammaan waxtarrada ay naga siiso xagga maaraynta xogta iyo tarjumaadda hadba baahidayada, waana taas tan aan halkan hoose kuugu keenay. liiska codsiyada ugu caansan ee ku jira qalabkan.
Yaanay magiciisu ku wareerin CVSAAN, kani waa aaladda kaa caawineysa inaad ka soo kabato iyo sidoo kale inaad abaabusho dhammaan macluumaadka nidaamyada mas'uulka ka ah maaraynta koodhka ilaha (wax walba oo ku saabsan gacanta version), sidoo kale waxay socotaa falanqaynta fasalada kaydinta kala duwan (CVS, ama xitaa Subversion iyo GIT) Falanqaynta macluumaadka ku jira xogta SQL.
Magaceedu wuxuu siinayaa fikrad waxa ku saabsan. Qalabkani wuxuu sameeyaa falanqaynta Raadinta Cayayaanka, taasoo suurtogal ka dhigeysa in la raadiyo noocyada kala duwan ee dhibaatooyinka raadraaca isla markaana lagu ururiyo qaar ka mid ah xogta laga soo ururiyay dhibaatooyinkaas oo ku jira xog-ururin SQL ah. Xilligan Bicho waxay taageertaa Jira, Bugzilla, GitHub, GoogleCode, Launchpad, Allura, iyo kuwo kale.
MlStats waxaa lagu horumariyey iyada oo loogu talagalay kala soo bax macluumaadka liiska liiska wuxuuna ku shaqeeyaa inta badan dhammaantood Mailman, intaas waxaa sii dheer waxay la shaqeysaa feylasha maxaliga ah ee qaabka mbox; MailingLitStats waxaad daraasad kaga sameyn kartaa xogta sida:
- Tirada farriimaha loo diray liiska boostada
- Boqolleyda jawaabaha la bixiyey.
- Iyo dhammaan macluumaadka guud ee laga heli karo liiska boostada.
Halkan waa maktabadda aad ka heli doonto keydadka Koodhka isha si toos ah uga socda GitHub
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad ka hesho xogta qaar ka mid ah cabbirada code-ka sida cabbirka, kakanaanta, iyo kuwa kale.
Haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan CMetrics waa tan meesha loo socdo ir.
Sibyl waxay noqon doontaa wehelkaaga haddii aad u baahan tahay inaad ka soo saarto waxoogaa macluumaad ah boggaga internetka oo leh qaab su'aal iyo jawaab ah oo ku hayso macluumaadka keydka macluumaadka. Waxaad ku shaqeyn kartaa Askbot. Sidoo kale bogag kale sida StackOverflow ee caanka ah ayaa ku jira qorshaynta qalabkan.
Waxaa habboon in lagu xasuusiyo haddii aad rabto macluumaad dheeraad ah ama aad kala soo baxdo mid ka mid ah qalabkan shaqsi ahaan, waxaad ka samayn kartaa bog kasta oo ka mid ah qalabka aad u baahan tahay.
Ugu dambeyntiina, waxaan jeclaan lahayn inaan ogaanno fikradahaaga ku saabsan qalabkan cabbiraadda oo aad u dhameystiran, iyo inay yihiin dhibic dheeri ah software bilaash ah taasina waxay wax weyn ka tari kartaa falanqaynta mashaariicda labadaba il furan, iyo sidoo kale mashaariic lagu soo saaray softiweer gaar ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » METRICS GRIMOIRE Qalabka lagu soo saaro cabbiraadaha software-ka.
Isku xir xiriirada iyo kalandarka adoon google ku xirneyn android